Flim2MM: 2017
ဒီဇာတ်ကားကို ပညာရှင်တွေ ဝေဖန်တာထက် ကြည့်ရှုသူတွေ ဝေဖန်ထားတာ ပိုများကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာတစ်ဦးနဲ့ စထားပေမယ့် ဇာတ်ကွက်တိုင်းမှာ ပြောထားတဲ့ စကားတွေက အရမ်းကို သဘာဝကျကျရယ်ရပါတယ်။
ဒီလို ရယ်ရလို့ ဟာသကားသက်သက်သာမက Crime ဆန်တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကိုလည်း တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဒီဇာတ်ကားထဲက Character တစ်ခုချင်းစီကို အသေးစိတ်ဖန်တီးထားတဲ့ အချက်ကလည်း သဘောခွေ့စရာပါပဲ။
ဝေဖန်ချက်တစ်ခုမှာဆိုရင် "ခင်ဗျားတို့ ဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်ပြီး အလိုမကျရင်လည်း လုံးဝ အလိုမကျဖြစ်ပြီး ကြိုက်ရင်လည်း လုံးဝ အလိုကျဖြစ်လိမ့်မယ်" လို့ ပြောထားပါတယ်။
Camera အယူအဆပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့လည်း ကယ်လီဖိုနီးယားတောင်ပိုင်းရဲ့နေရောင်ကို အားပြုရိုက်ထားပြီး အရောင်စပ်အသုံးပြုပုံကလည်း အခြားရုပ်ရှင်များနဲ့ ကွဲပြားကြောင်း ပညာရှင်များက ဆိုထားပါတယ်။
R-rated ဖြစ်ပြီး မည်သို့ပင်ဆိုစေ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါကြောင်း.....
[FORMAT]:………………………….:) BRRip / 1080p HD
[GENRE]:……………………….… .:) Comedy, Crime
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 50 mins
Posted by Y Junction at 2:02:00 AM No comments:
Labels: Comedy, Crime, Hollywood
ဒီရုပ်ရှင်ဟာ အညွှန်းရေးပြဖို့ တကယ်ခက်ခဲတဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ခုပါ ။ ကြည့်ချင်အောင် ရေးပြရရင် ကြည့်ချင်မှာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် သဘောရိုးလောက်ပဲ ပြောပြပါရစေ ...
ရင်ထဲမှာ တကယ်ခံစားလာရရင် စာအဖြစ် ချရေးပြရမှာ ခက်သလိုပဲပေါ့ ......
၁၉၇၃ ခု ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့မှာ ဆူဇီဆယ်လ်မန် ဆိုတဲ့ မိန်းကလေး အိမ်ကနေ ပျောက်ဆုံးသွားတယ် ။ ဆူဇီပျောက်ဆုံးမှုနဲ့ အတူ ဆူဇီအဖေဟာ အိမ်နီးနားချင်း ဂျော့ဟာဘီကို မသင်္ကာဖြစ်မိတယ် ။ ရဲတွေကရော လူသတ်သမားကို ဖော်ထုတ်နိုင်မှာလား ၊ ဆူဇီ အဖေကရော သူ့သမီး သေဆုံးသွားတာကို ဖော်ထုတ်နိုင်မှာလား ။
နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ Mark Wahlberg နဲ့ Rachel Weisz သရုပ်ဆောင်ထားတယ် ဆိုပေမယ့် ဇာတ်လမ်းပုံစံက တစ်မျိုးပါပဲ ၊ ပုံမှန် သမာရိုးကျ ဇာတ်လမ်းကနေ ခွဲထွက်ပြီး သေခြင်းရဲ့ အခြားတစ်ဘက် ဆက်ကူးမတ်ကူးကာလမှာ လွင့်မြောနေရင်းကနေ အကြိမ်ကြိမ် စိတ်ထဲကနေ ပြောပြနေသလိုမျိုးလေး ဇာတ်လမ်းကို စီစဉ်ထားတယ် ။
ဖခင်တစ်ယောက်က သူ့သမီးအပေါ် ထားတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ အိမ်ထောင်တွင်း စိတ်ပူပင်မှုတွေကို အဓိကထားပြီး လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေး ဖြစ်အောင် ရိုက်ပြသွားနိုင်တယ် ။ အခုတစ်လော ဖြစ်နေတဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေလိုပါပဲ စိတ်ကိုခိုင်ခိုင်ထားပြီး ကြည့်သင့်ပြီး ပညာယူလေ့လာသင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားပါပဲ ။
[GENRE]:……………………….… .:) Drama, Fantasy, Thriller
[FILE SIZE]:…………………….….:) 917 MB
[Translated By]:………….........:) Wai Linn Kyaw
Posted by Y Junction at 8:59:00 PM No comments:
Labels: Drama, Fantasy, Hollywood, Thriller
Posted by Y Junction at 6:08:00 AM No comments:
Posted by Y Junction at 10:41:00 PM No comments:
Posted by Y Junction at 6:42:00 PM No comments:
Posted by Y Junction at 10:13:00 AM 1 comment:
အနာဂတ်မှာ လူသားတွေရဲ့အစား စက်ရုပ်များက နေရာယူလာတဲ့ ကဏ္ဍတွေ များပြားလာလိမ့်မယ်လို့ ၁၉၅၀ အစောပိုင်းကာလများက ဂျပန်နဲ့ အမေရိကန်တွေရဲ့ စက်ရုပ်တီထွင်မှုအလားအလာကောင်းတွေအားဖြင့် မျှော်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်။
သို့သော် အရှိန်အဟုန်နဲ့ တီထွင်မှုတွေကြားမှာ ကွဲပြားတဲ့ အမြင်နဲ့ တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားကြောင့် လူတွေရဲ့အနာဂတ်စက်ရုပ်အပေါ်ထင်မြင်ချက်ဟာ အဆိုးဖက်ကို ဦးတည်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဇာတ်ကားနာမည်ကတော့ A.I. Artificial Intelligence ဖြစ်ပါတယ်။(flim2mm မှာ တင်ဆက်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်)
အလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးဖို့နဲ့ လူသားတွေရဲ့ စိတ်ခံစားချက် မလုံခြုံမှုကို ထင်ဟပ်နေတဲ့ လူသားအစားထိုး စက်ရုပ်တွေအပေါ်အမြင်ကွဲပြားမှုတွေ ရှိသော်ငြားလည်း ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ နည်းပညာရိုက်ခတ်မှုကတော့ REAL STEEL လို ဇာတ်ကားမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ လူဖန်တီးတဲ့ စက်ရုပ်များအပေါ် အကောင်းမြင်တက်ရန် ပြန်ဦးတည်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေလို့ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းကတော့ စက်ရုပ်ဝါသနာအိုးတွေရော လက်ဝှေ့ဝါသနာအိုးများအကြိုက် ဖြစ်ပါကြောင်း....
[GENRE]:……………………….… .:) Action, Drama, Family
[FILE SIZE]:…………………….….:) 909 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 2h 07 mins
Labels: Action, Drama, Family, Hollywood
Pixar ရဲ့ Inside Out ကို Review မတင်ခင်မှာ သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံးတွေထဲက တစ်ကားဖြစ်တဲ့ The Incredibles အကြောင်းကို ပြောရင်း Pixer အကြောင်းကိုနည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Pixar ကုမ္ပဏီ က ကာတွန်းကားတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကြီး တစ်ခု (Animation Giant) ဖြစ်ပြီး Dreamwork တို့ Disney တို့လို ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှာ Lucasfilm ကုမ္ပဏီရဲ့ (Star Wars, Indiana Jones တို့ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ studio ဖြစ်ပါတယ်။) animation department အဖြစ် စတင်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၆ လောက်မှာ Apple တည်ထောင်သူ Steve Jobs ရဲ့ ထောက်ပံ့မှုနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ခွဲထွက်ခဲ့သလို၊ Steve Jobs ကလည်း ကုမ္ပဏီမှာ အဓိက ရှယ်ယာရှင်ဖြစ်လာပါတယ်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာတော့ Pixar ကို Disney က 7.6 Billion Dollars နဲ့ ၀ယ်ယူခဲ့ပါတယ်။
Pixar ကို ပရိတ်သတ်ကြီးအနေနဲ့ သိကြမှာဖြစ်ပေမယ့် အများစုမသိကြတာကတော့ သူရိုက်လိုက်သမျှ ကာတွန်းကားအများစုဟာ၊ ငွေကြေးအရရော အနုပညာအရပါ အောင်မြင်လေ့ရှိပါတယ်။ ၁၉၉၅ မှာ Toy Story နဲ့စခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ Inside Out အပါအ၀င် ၁၅ ကားရိုက်ကူးထားပြီး Cars2တစ်ကားသာ ဇာတ်လမ်းမကောင်းဘူးဆိုပြီး ဝေဖန်ခံရပြီး၊ ကျန် ၁၃ ကားလုံးက ရုပ်ရှင်ဝေဖန်သူတွေရဲ့ ချီးမွှမ်းခြင်းကိုခံထားရပါတယ်။ ဒီဘက်ခေတ်မှာ Pixar ကထုတ်တဲ့ကားကို ကောင်းပြီးသားလို့ဆို ရလောက်တဲ့အထိ အရှိန်အ၀ါ ကြီးလှပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ Pixar က The Good Dinosaur ဆိုပြီး နောက်ထပ် တစ်ကားထွက်ဖို့ရှိပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် တစ်နှစ်ထဲ နှစ်ကားထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။
The Incredibles က အကောင်းဆုံး ကာတွန်းကားတွေထဲက တစ်ကားသာမက အကောင်းဆုံး Superhero ကားတွေထဲမှာပါ တစ်ကားအပါအ၀င် အဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ Incredibles မှာ 'S' ပါရတာက ဒါသူတို့ မိသားစုတစ်ခုလုံး ညွှန်းရင် ဒီလိုပဲ သုံးပါတယ်။ ဥပမာ Mr and Mrs Smith ကို The Smiths လို့ သုံးကြပါတယ်။
သူရဲ့ ဇာတ်လမ်းက အရင်တုန်းက Superheros တွေရှိကြပေမယ့် သူတို့ကြောင့် အပျက်အဆီးတွေများလာသလို လူတွေထိခိုက် ဒဏ်ရာရတာတွေများလာလို့ အစိုးရက သူတို့ကို သာမန်လူတွေအဖြစ်သူနေရမယ်လို့ သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအစမှာဆို Mr. Incredible က ကိုယ်ကိုယ်ကို သတ်သေမယ့်သူကို ကယ်ရင် ဒီလူက ဒဏ်ရာရသွားတော့ သူ့ကို တရားပြန်ဆွဲတာမျိုးတွေဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီကားမှာ Mr.Incredible က သန်မာတဲ့ Hero ဖြစ်ပြီး၊ သူ့မိန်းမ ဖြစ်သူ က Elastic Girl ဆိုတဲ့အတိုင်း ကိုယ်ခန္ဓာကို လိုသလို ဆန့်ထုတ်လို့ ရပါတယ်။ သူတို့ ကလေးနှစ်ယောက်မှာ အမဖြစ်သူက ကိုယ်ပျောက်၊ သားဖြစ်သူက အရမ်း မြန်ပါတယ် (Quicksilver/Flash လိုပါ)။ Mr.Incredible မှာ Forzone လို့ခေါ်တဲ့ ရေခဲခဲလို့ရတဲ့ ဟီးရိုး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူတို့ကတော့ အဓိက ဇာတ်ကောင်တွေပါ။ အခြားဟီးရိုးတွေ ရှိပါသေးတယ်။
ဇာတ်လမ်းကတော့ Mr.Incredibles က ပထမဆုံးအခန်းမှာ သူ့ကို အရမ်းကြိုက် အရမ်းလေးစားတဲ့ ကောင်လေး တစ်ယောက်ကို သူက ဂရုမစိုက်မိသလို၊ သူ့နောက်လိုက်အဖြစ်လည်း လက်မခံတာကြောင့် နှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါမှာ ပြန်ကလဲ့စားချေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကရှင်းပေမယ့် မိသားစု အကြောင်း၊ ဟီးရိုးအကြောင်း ဖြစ်တာကြောင့် အပျင်းပြေကြည့်လို့ကောင်းရုံတင်မ ဇာတ်လမ်း ဇာတ်အိမ်လည်း အရမ်းကောင်း ပါတယ်။
အက်ရှင်တွေလည်းကောင်းသလို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်လည်း ရိုက်ကူးထားနိုင်သလို ဒီနေ့အထိ ဘယ်လိုကြည့်ကြည့် မရိုးနိုင်ပါဘူး။ ဒီဘက်ခေတ် ကလေးတွေ လူငယ်တွေ အကြိုက်တွေ့မယ့် ကာတွန်းကား ကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစု အတူတူကြည့်ဖို့ ကောင်းတဲ့ကား ဖြစ်ပြီး၊ ကြည့်သင့်တဲ့ကားကောင်း တစ်ကားပါ။
[GENRE]:……………………….… .:) Animation, Adventure, Action
[FILE SIZE]:…………………….….:) 826 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 55 mins
Posted by Y Junction at 9:47:00 PM No comments:
Labels: Action, Adventure, Animation, Hollywood
ဟောင်ကောင်မင်းသားကြီး Jackie Chan ရဲ့ Hollywood ကားတွေထဲမှာ လူကြိုက်အများဆုံးလို့ ပြောလို့ရတဲ့ Shanghai Noon နဲ့ Shanghai Knights တို့ကို အရင်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ “Shanghai Dawn” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ဒီကား ဖြန့်ချိမယ့်သတင်း ကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက ထွက်ခဲ့ပြီး၊ ခုအခါမှာတော့ Napoleon Dynamite, Nacho Libre နဲ့ လက်ရှိပြသနေတဲ့ ဟာသကား Masterminds တို့ရဲ့ ဒါရိုက်တာ Jared Hess က တာဝန်ယူဖန်တီးမယ်လို့ Hollywood သတင်းရပ်ကွက်က ဆိုပါတယ်။ ဒုတိယကား Shanghai Noon ထွက်ရှိခဲ့စဉ်က၊ နောက် sequel ကို Egypt မှာ ရိုက်ကူးမယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ခဲ့ပေမယ့်၊ လောလောဆယ်တော့ ဘယ်မှာဇာတ်အိမ်တည်မလဲ၊ မသေချာသေးတဲ့ Shanghai Dawn မှာ Chan နဲ့အတူ မင်းသား Owen Wilson လဲ ထပ်မံပါဝင်မှာပါတဲ့။
Ref - MCTN
[FILE SIZE]:…………………….….:) 819MB/ 948 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 2h 54 mins
Posted by Y Junction at 7:27:00 AM No comments: